Wararka - Foshan Smartroof International Co., Ltd.
Saqafka PVC: Maxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato
Dhammaan noocyada cusub ee saqafka ee laga heli karo suuqa maanta, kuwa ugu yar ee la fahmay waa saqafka PVC. PVC waxaa badanaa loo maleeyaa inay yihiin dhuumaha tuubooyinka, laakiin balaastiiggaan isku dhafan ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa inuu saameyn weyn ku yeesho noocyada saqafyada qaarkood sida muxaafidiinta iyo saqafyada fidsan Degaanka ...
Saqafka PVC: Maxuu yahay maxayna yihiin faa iidooyinkiisa?
Markay tahay saqafka ganacsiga, milkiileyaasha guryaha waxay kala dooran karaan xuubab kala duwan. Mid ka mid ah xuubabka saqafka ganacsiga ee milkiileyaasha guryaha ay tixgelin karaan waa saqafka PVC ama polyvinyl chloride, oo ah xalka saqafka ah ee hal-dabaq ah oo fidsan ama hooseeya. Accordi ...
Covid-19 Falanqaynta Saamaynta-Warbixinta Cilmi Baadhista Suuqyada Waxsoosaarka Macdanta ee Birta ah ee Dunida oo aad ufiican Kobcin, Gobollo iyo Ciyaartoy waaweyn, Noocyada, Codsiyada, Falanqaynta Taxanaha 2026
Dulmarka guud ee "Sheet Sheet Birta Sheyga" wuxuu ka caawinayaa bixinta baaxadda iyo qeexitaannada, natiijooyinka muhiimka ah, wadayaasha koritaanka iyo dhaqdhaqaaqyada kala duwan. Suuqa birta jiingada ah ayaa la filayaa inuu ka koco USD XX million sanadka 2020 ilaa USD XX million sanadka 2026, iyadoo heerka kororka sanadlaha ah ee X ...
Warbixinta Suuqa Xaashida Birta Jiingadsan 2019-2025 Falanqaynta Warshadaha Caalamiga, Isbeddellada, Baaxadda Suuqa iyo Saadaasha
UpMarketResearch waxay bixisaa warbixintii ugu dambeysay ee falanqaynta warshadaha iyo saadaasha suuqa biraha jiingado ee adduunka laga bilaabo 2025 ilaa 2025. Warbixintu waxay bixisaa aragtiyo muhiim ah waxayna macaamiisha siisaa faa iido tartan iyadoo loo marayo warbixinno faahfaahsan Tani waa warbixintii ugu dambeysay waxayna daboolaysaa th ...
dhagax maris saqafka ka samaysan oo dhagax lagu dahaadhay
Warbixintu waxay soo bandhigeysaa cabirka suuqa saqafka ee birta ah ee dhagxaanta kuxiran (qiimaha, waxsoosaarka iyo isticmaalka), oo ay burburiyeen soo saaraha, gobolka, nooca iyo arjiga (heerka xogta 2019 iyo saadaasha 2025) Daraasadani waxay sidoo kale falanqaysay xaalada suuqa, saamiga suuqa, heerka koritaanka, isbeddelada mustaqbalka, mar ...
Mustaqbalka Dhismaha: Saqafka Birta
Hordhac: Saqafka birta ayaa marba marka ka dambeysa caan ku noqonaya noocyo badan oo kala duwan iyo adeeg dheeri ah awgeed. Ka-qaybqaataha Scott Gibson wuxuu dhexgalay dhammaan xulashooyinka kala duwan ee saqafka biraha, laga bilaabo qalabka illaa faahfaahinta rakibidda. Maqaalkani waxaa ku jira sharraxaadda istaagga qiimeynta saqafka biraha ...
Suuqa birta ah ee birta ah waxaa ka mid ah xogta waddanka / gobolka, koboca ganacsiga, cabirka suuqa, falanqaynta SWOT, fursadaha ganacsiga, codsiyada, isbeddellada iyo saadaasha sannadka 2024
Home / Galvanized Steel Strand Wire Market waxaa ku jira xogta waddan / gobol ee waawayn, kobaca ganacsiga, cabirka suuqa, falanqaynta SWOT, fursadaha ganacsiga, codsiyada, isbadalada iyo saadaasha sanadka 2024 Warbixinta “Galvanized Steel Strand Wire Market” ee sanadka 2020-2024 ayaa bixisa saamiga suuqa, CAGR, prod ...
Ahmiyada ay leedahay saqafka birta inta lagu gudajiray iyo kadib Faafida COVID-19
Sebtember 7, 2020, New York (Global News) -Reportlinker.com ayaa ku dhawaaqday sii deynta "Global Roofing Industry" warbixintii faafida COVID-19 waxay ka dhigeysaa wax aan macquul aheyn in la dhameystiro Mashaariicda dhismaha, boqollaal badan oo mashaariic ahna waa la hakiyay Amarada dib udejinta ku meelgaarka ah, sidaas ...
Maxaa diidaya in sibidhka saqafka sibidhka si adag loo nadiifiyo (Dhibaatada ay leedahay saqafyada dusha sare ee asbestos ee ku saabsan nadiifinta)
Ma jiraan wax xaddidan oo ku saabsan soo-gaadhista asbestos. Waxay ku dhici kartaa meel kasta, badanaa sababtoo ah adeegsiga asbestos meel kasta muddo tobanaan sano ah. Xitaa gurigaaga (haa, gurigaaga) waxaa laga yaabaa inuu ka buuxo walaxdan dilaaga ah. Hawsha fudud ee nadiifinta marmarka saqafka ayaa umuuqata mid amaan ah. Si kastaba ha noqotee, tani waxay ku gelin kartaa adiga, f ...
Qasaarooyinka Asphalt Shingle Roofing
Qasaarooyinka Asfhalt Shingle Roofing Kuwa soosocda waa qaar ka mid ah cilladoyinka loo adeegsado isticmaalka saqafka dusha sare ee loo yaqaan 'asphalt shingle' ee gurigaaga: Shilalka Asphalt waxay u nugul yihiin kor u qaadista dabaysha - Noocyada jaban ee shilalka waxay u nuglaan karaan dabaylo xoog badan, taas oo u horseedi karta iyaga t. ..
Baadh naqshadda saqafka biraha ee dhismayaasha is-cuntada
Boggan waxaa ka shaqeeya hal ama dhowr shirkadood oo ay leedahay Informa PLC, dhammaan xuquuqda lahaanshahana iyagua iska leh. Xafiiska diiwaangashan ee Informa PLC waa 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Ka diiwaan gashan England iyo Wales. Lambarka 8860726. Nidaamyada saqafka birta ah ayaa caan ku ah naqshadaha dhismaha ee is-kaydinta ee ...
Saqafka Birta Ameerika
Saqafka birta ayaa taariikh dheer ku leh Mareykanka, laakiin illaa 20 sano ka hor waxay ahayd mid xoogaa ciyaartoy ka ah dhismaha guryaha, iyadoo leh kaliya 3.6% suuqa dib-u-hagaajinta. Tiradaasi waxay qiyaastii afar laabantay ilaa waqtigaas, sida laga soo xigtay koox ka ganacsata warshadaha. Maxaa dhacay? Saqafka birta ah ayaa hadda la heli karaa ...